फिल्म 'पिकेमा' ठुल्ला शब्द बोलेको कारण अमिर खानको खिलाफ पुलिस कमप्लेन
दिल्लीको मुख्य मन्त्री अरविंद केजरीवाल पछि फिल्म अभिनेता अमिर खानको खिलाफ पुलिस कमप्लेन भएको छ। अमिर खानले आफ्नो फिल्म 'पिके' मा पुलिसहरुको लागी 'ठुल्ला' शब्द प्रयोग गरेको कारण उनको खिलाफ अशोक नगर प्रहरी थानामा कमप्लेन लेखिएको हो। उजुरी कर्ताको नाम उल्हास पिआर भनिएको छ। उल्हास एक शर्ट फिल्म निर्माता हुन्।उल्हासले आफ्नो उजुरीमा लेखेका छन् अमिर खानले आफ्नो फिल्म 'पिके' मा पुलिसहरुलाइ 'ठुल्ला' भनेर बोलाएका छन्। उल्हासको भनाई छ जब दिल्लीको मुख्य मन्त्री माथी मुद्दा लाग्न सक्छ भने अमिर खान लाई किन छुट जबकी देशको...
बलिउडकी दबंग गर्ल सोनाक्षी सेन्हालाई आफ्नो लगजरी कार छोडेर मुम्बईको लोकल ट्रेनमा सफर गर्नु परेको छ।उनले आधी रातमा लोकल ट्रेनमा यात्रा गरेकी छिन हालाकी यो उनको कतै जानको लागी हैन बल्की उनको आउदो फिल्म 'अकीरा' को लागी हो। सोनाक्षीले ट्वीटर मार्फत ट्वीट गरेर यस्को जानकारी दिएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन् यो भन्दा अगाडी उनले लोकल ट्रेनमा कलेजमा हुदाँ यात्रा गरेकी थिइन र अैले यो फिल्मको लागी लोकल ट्रेनमा यात्रा गरेकी हुन्। दुईमा फरक यहि रह्योकी पहिला यो ट्रेन एकदम भिड...
सलमान खानको बहिनी अर्पिता को बर्थडेमा आखिर कसले बोलाए पुलिस (तस्बिर सहित)
सलमान खानको बहिनी अर्पिता को आज २६ अ जन्म दिन हो।यही उपलक्ष्यमा सलमान खानले आफ्नो बहिनीको लागी बर्थडे पार्टी राखेका थिए। यो पार्टीमा करण जोहर देखी लिएर रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा, इमरान खान, पुलकित सम्राट आदि कई सेलिब्रिटीज हरु उपस्थित रहेका थिए। यी सबै बलिउड सिताराहरु मज्जाले पार्टीको आनन्द उठाइरहेका थिए।तब केही यस्तो भयो कि यी सबैको मस्तीमा नमाज्जाले ग्रहण लाग्यो। छिमेकीहरुले पुलिसमा कम्पेलन गरेको कारण यो पार्टी रोकिन पुग्यो। पार्टी सलमानको बहिनी अर्पिताको घर पेसिफिक हाउस बान्द्रामा हुदै थियो। तब पुलिसले सलमानको पार्टीमा गएर लाउडस्पिकर बन्द गरिदिए...
विवादमा फसेको फिल्म 'मोहल्ला अस्सी' लिक भएको छ
धर्म विशेष विरुध्द र अशब्दको कारण अलि समय अगाडी चर्चामा रहेको चलचित्र मोहल्ला अस्सी पुरै फिल्म रिलिज हुनु अगावै लिक भएको छ। रिलिज हुनु भन्दा अगाडीनै शनिवार केही घन्टाको लागी यो फिल्म अनलाइ साईट्सहरुमा लिक भएको थियो। फिल्मी जगतमा यसमा मिलिजुली गरेको जालझेल देखिएको छ। २ घण्टा ११ मिनेटको यो फिल्म एउटा चल्दो अनलाइन साइट्समा राखियो र मानिसहरुले यसलाइ मज्जाले हेरे पनि र लाइक्स र हिट पनि गरे तर साँझ सम्म यो फिल्म हटाइसकेको थियो। मानिसहरुले यस्लाइ अर्को साइट्समा शेयर पनि गरेका छन्। फिल्ममा मुख्य भुमिका निभाइरहेकी साझी तंवरलाइ जब यस बारेमा सोधियो तब उनले भनिन...
जब अभिषेकलाइ महसुस भयो उनी कति खराब कलाकार छन् भनेर ।
बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चनलाइ आफ्नो बाबु को अभिनयलाइ देखे पछी महसुस हुन्छ कि उनी कति खराब कलाकार छन् भनेर आफ्नो बाबु को अगाडी उनी केही पनि नभएको महसुस गर्दछन्।अभिषेकले भनेका छन् कि उनी आफ्नो पिता अमिताभ बच्चनको एकदम ठुलो फ्यान हुन् उनी अझ पनि आफ्नो बाबु सँग एउटै पर्दामा काम गर्न चाहछन भनेका छन्। उनी भन्छन कि क्यामराको अगाडी उनी आफ्नो बाबु सँग हरेक समय लाभ उठाउने गर्दछन्।साथै उनले आफ्नो बाबु सँग धेरै कुरा सिकेका छन्। अभिषेकले यो पनि भनेका छन् कि आफ्नो बाबुलाइ देखेर उनलाइ लाग्दछ कि उनको बाबु कति राम्रो कलाकार हुनुन्छ र आफु कित खराब कलाकार छु भनेर। अभिषेक आफ्नो...
फिल्म 'रोबोट' सीक्वलमा रजनीकान्त सँग देखिने भएकी छन् दिपिका पादुकोण र विक्रम
सुपरस्टार रजनिकान्तको सुपरहिट फिल्म 'रोबोटको' सीक्वल बन्ने तयारिमा छ। फील्मको प्रि प्रोडक्शनको काम पहिलानै सुरुभै सकेको छ। यस फिल्ममा 'रजनीकान्त सर' पहिला देखीनै हुने निश्चित भैसकेको छ। यो फिल्मलाइ लिएर बिक्रम उत्साहित छन् तर यस्को अाैपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी नै छ। प्राप्त जानकारी अनुसार फिल्मको मुख्य भुमिकामा दिपिका पादुकोण देखिने भएकी छिन्।हैप्पी न्यू ईयर, फाइंडिंग फैनी र पीकू जस्तो सफल फिल्म मा देखिएपछि अब दिपिका रोबोट को सीक्वल मा देखिने सम्भावना भएको छ। खबर अनुसार फिल्मको निर्माता शंकरले दिपिका सँग यो बारेमा कुरा गरिसकेका छन्। यो...
आर्यन बनाउँदैछन् ‘मेरो एउटा साथी छ ’ को सिक्वेल
अभिनेता आर्यन सिग्देल आफ्नो हिट फिल्म ‘मेरो एउटा साथी छ’ को सिक्वेल बनाउने तयारी थालेका छन् । हाल धमाधम यो फिल्मको स्क्रिप्टमा काम भैरहेको छ । फिल्मको निर्देशन दिनेश राउतले गर्नेछन् । आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठले अभिनय गरेको मेरो एउटा साथी छ लाई फिल्म क्षेत्रदेखि दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए । यही फिल्मबाट आर्यन र नम्रताको जोडी नेपाली फिल्ममा जमेको थियो । मेरो एउटा साथी छ लाई निर्माण गरेको आइकोर फिल्मस्ले अहिले यो नाम दिन नमानिरहेको वुझिएको छ । तर, आर्यनले आर्यन सिग्देल इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरबाट यो फिल्म बनाउन चाहन्छन् । यसैले पनि अहिले नामका लागि...
सलमानलाई भेट्न आएकी एक पाकिस्तानी महिला पक्राउ बिना भिसा बिना पार्सपोट यात्रा गर्दा
गोवरमेन्ट रेलवे पुलिसले अटारी बाट दिल्ली जान लागेको ट्रेन बाट एक पाकिस्तानी महिलालाई बिहिबार राती जालन्धर स्टेशन बाट पक्राउ गरेको छ ति महिला सँग न त पार्सपोट छ न त भिसा नै। पुछताछ पछी महिलाले भनेकी छिन कि उनी आफ्नो मामा सँग यात्रा गर्दै थिइन र उनको पार्सपोट र भिसा उनको मामा सँग नै छ। जीआरपी को भनाइ अनुसार महिला कराँची की हुन र उनको नाम चंदा हो। ति पाकिस्तानी महिलाको भनाइ अनुसार उनी 'बजरंगी भाईजान' यानी की सलमान खानलाइ भेट्न भारत आएकी हुन्।ती महिलालाई जालन्धर बाट अगाडी यात्रा गर्न दिइएको छैन र महिला अटारी बाट ट्रेनमा चढेको हुनाले उनलाई अटारी पुलिसको जिम्मा...
एशराजको फिल्ममा करण अर्जुन फेरी देखिने भएका छन्।
आपसी मतभेदको कारण बलिउडको बादशाह शाहरुख खान र दबंग सलमान खान लामो समय सम्म एकै पर्दामा देखिएका थिएनन्। बलिउड फ्यानहरुलाइ यि दुइ सुपरस्टारहरुलाइ एकै पटक पर्दामा देख्न सपना जस्तै भइसकेको थियो। विशेष स्रोत वाट आएको जानकारी अनुसार बलिउडको करण र अर्जुन फेरी एक पटक देखिने तयारीमा छन। यशराज फिल्मको मालिक आदित्य चोपडा यि दुइलाइ एउटै पर्दामा ल्याउने तयारीमा छन्। सुन्नमा आएको छ कि यो त्यही फिल्म हो जसमा पहिला रणविर सिंहलाइ लिने कुरा थियो तर आदित्यलाइ लाग्यो कि रणविर भन्दा शाहरुख र सलमानको पुन एकपटक बक्स अफिसमा तहल्का मचाउन सक्नेछ त्यसैले रणविर को...
अजयले कुन कुराको गरे खण्डन ?
ऐक्टर अजय देवगन: रोहित शेट्टीको फिल्म 'दिलवाले' मा अतिथिको भुमिकामा निभाउने कुरालाई अजय देवगनले खण्डन गरेका छन्। शाहरुख र काजोलको मुख्य भुमिका रहेको फिल्म 'दिलवाले' मा अजयको अतिथिको भुमिका रहने छ भनेर जुन कुरा फैलिएको छ त्यो कुरालाइ अजयलाइ नकारेका छन्। जब अजय र शाहरुख सँगै डिनर गरेको फोटो मिडियामा आएपछि यो हल्ला चलेको थियो। अजयले यसबारेमा यो कुरा साचो हैन भनेका छन्।यो मात्र एउटा हल्लामात्र हो 'म दिलवालेमा कुनै पनि अतिथिको भुमिका निभाइरहेको छैन'। अजय बुल्गेरियामा फिल्म 'शिवाय' को शुटिङको लागी लोकेशन हेर्न गएका थिए र तब 'दिलवाले' को शुटिङ पनि त्यही...
सनि लियोन को आउँदो फिल्म 'मस्तीजादे' सेंसर बोडमा नराम्रो सँग अड्केको छ। सुन्नमा आएको छ कि फिल्ममा धेरै बोल्ड सिनहरु छन् र सनिको गरमा-गरम दृश्यपनि धेरै नै देखाइएको छ। सेंसरको कैंचीको धार आजकल धेरैनै धारीलो भएको छ र सनि लियोनको नाममा त यो धार झनै तेज हुने नै भयो। सेंसर बोर्डले यो फिल्मलाइ पास गर्न नाई भनेका छन् तर फिल्मको निर्माताले हार मानेका छैनन् उनले यो फिल्म रिवाजिङ कमेटीमा लगेका थिए तर यहाँ पनि केही फाइदा भएन। अब फिल्मलाइ फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल भाठ लगियो तर नतीजा निर्माता को पक्षमा भएन। अब एउटा मात्र बाटो भनेको अदालत हो तर फिल्म सँग जोडीएका...
'दिलवाले' र 'बाजीराव मस्तानी' एकै पटक रिलिज हुने हुदाँ दुखी प्रियंका
प्रियंका चोपडाले उनको आउँदो प्रिरियड ड्रामा फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' र शाहरुखको फिल्म 'दिलवाले' एकै समय क्रिसमस डे को दिन रिलिज हुन लागेको हुदाँ उनलाइ दुख लागेको बताएकी छिन्। १८ दिसम्बर संजय लिला भंसालीको फिल्म 'बाजीराव मस्तानि' लाइ रोहित शेट्टीको फिल्म 'दिलवाले' ले टक्कर दिने भएको छ। 'बाजीराव मस्तानी' मराठा पेशवा बाजीरावको प्रेम कहानीमा आधारीत फिल्म हो ।जसमा रणविर सिंह बाजीराव को, प्रियंका उनको पहिलो पत्नी र दिपिका पादुकोण उनो दोस्रो पत्नी को भुमिकामा देखिने भएका छन्। फिल्म 'दिलवाले' सँग हुने टक्कर टार्नको लागी जब फिल्मको रिलिज डेट अगाडी...
छोरी पछि अब लारा दत्ता आफ्नो फिल्ममा हुनेछीन व्यस्त ।
मिस युनिवर्स र वलिउडको नामचिन अभिनेत्री लारा दत्ताले मुंबई मा अलि दिन अगाडी भएको एउटा कार्यक्रममाभनेकी छिन् कि उनी आफ्नो परिवारको एकदमै ख्याल राख्ने गर्दछिन। केही वर्ष अगाडी छोरीको आमा बनेकी लारा दत्ता आफ्नो छोरीको स्वस्थ्यलाइ लिएर लापरवाही मन पराउँदिनन्। लारा दत्ता फिल्म इनड्रसटीमा आफ्नो फिटनेसलाइ लिएर पनि चिनिन्छिन्। यो कार्यक्रममा पनि उनी एकदमै फिट देखिएकी थिइन्। लारा ले २००३ मा अक्षय कुमार र प्रियंका चोपडा द्ररा खेलिएको चलचित्र अदाज वाट बलिउटमा कदम राखेकी थिइन। मस्ती, नो इन्ट्री, हाउस फुल जस्तो सुपरहिट फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी लाराले खेल...
हुमा कुरैशी को वजन लाइ मजाक बनाएर फेरि फसे ऋषि कपूर
ऋषि कपुर आफ्नो ट्वीटको कुरालाई लिएर प्राय सधैनै चर्चामा रहन्छन्। यो पाली पनि त्यसतै केही भयो उनले अभिनेत्री हुमा कुरैशीको बारेमा ट्वीट गर्दा उनी फस्न पुगे। उनले हुमा कुरैशी को बजनलाइ लिएर केही यस्तो लेखिदिए जस्ले गर्दाको हुमा फ्यानहरुले उनलाइ कडा प्रतिवाद गर्न पुगे। आखिर अन्तमा ऋषि ले फ्यानहरु सँग माफी मागेर आफ्नो ट्वीट डिलिट गरे। २८ जुलाइमा हुमाको २९ अ जन्मदिन थियो र सबै बलिउड सिताराहरु ले उनलाई शुभकामना दिदै थिए। यस्मा ऋषि कपुर को पनि नाम सामिल छ तर उनले शुभकामना दिदा उनी यसरी फस्लान भनेर उनले सोचेका थिएन्न होला। शायद उनी अरु मानिसहरु भन्दा अर्कै तरिकाले...
बैंगिस्तान को कुरालाइ लिएर किन चुप छिन जैकलीन फर्नांडिस?
अगस्तमा जैकलीन फर्नांडिसको २ वटा फिल्म रिलिज हुदै छ। ७ अगस्तमा बैंगिस्तान र १४ अगस्तमा बर्दश। जैकलीन बर्दशको प्रमोशनमा जताततै हिडिरहेकी छिन भने उन बैंगिस्तानको कुरालाइ लिएर एकदम चुप छिन। यहाँ सम्मकी उनी यो फिल्मको प्रमोशनमा पनि हिडेकी छेनन्। रितेश देशमुख र पुलकित सम्राट मात्र यो फिल्मको प्रमोशनमा हिडेको देखिनछन्। आखिर किन जैकलीन यो फिल्मको प्रचार गरिराखेकी छेनन्? प्राप्त जानकारी अनुसार यो फिल्ममा भएको रोल सँग जैकलीन खुसी छैनन्। फिल्म साइन गर्दा जैकलीन लाइ उनको रोल सानो छ भनिएको थियो तर पछि फिल्ममा उनको रोल बढाइएको कारण उनी खुसी छैनन। फिल्मको...